के हो चट्याङ ? कसरी बच्ने ? अपनाउनुहोस यी १० उपाय - Saptakoshionline
के हो चट्याङ ? कसरी बच्ने ? अपनाउनुहोस यी १० उपाय
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ११, २०७७ समय: १०:२४:३०
काठमाडौं । देशभर हुरी चल्ने, चट्याङ पर्ने मौसम सुरू भएको छ। बारा पर्सामा हुरी बतासले २८ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ६ सय भन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ । चैत बैशाखको बेला यी यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा सामान्य सावधानी नअनाउँदा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।
चैत–वैशाखको बेला मौसमी हिसाबले चट्याङ र हावाहुरीको समय हो । यो बेला प्रिमनसुनको सिजन हुने र प्रिमनसुनमा हावाहुरी र चट्याङ पर्ने सम्भावना बढि रहने गरेको मौसमविदहरु बताउँछन् । गर्मीको समयमा जमिन तात्दै जाने र त्यसले हावा वायुमण्डलमा सर्दै जाने प्रक्रियालाई न्यून चापीय क्षेत्र भनिन्छ । त्यो बढ्दा मौसममा प्रतिकूल भई हावाहुरी चल्ने, वर्षा हुने र चट्याङ पर्ने गर्छ ।
मनसुन पूर्वको यो समयमा सामान्य वर्षा भएपनि मौसममा खराबी आएपछि मेघगर्जनसहित हावाहुरी चल्ने गर्दछ ।
चट्याङ भनेको आकाशबाट खराब मौसमको बेलामा जमीनमा खस्ने एक प्रकारको बिद्युतिय करेन्ट हो । हुरीबतासको मौसम वा वर्षायाममा वायुमण्डलमा विपरीत दिशाबाट तीव्र गतिको वायु एकापसमा ठोक्कीँदा चर्को आवाजसहित बढी भोल्टको विद्युतीय लहर उत्पन्न भई खास बाटो बनाएर जान्छ, यसलाई नै चट्याङ भनिन्छ । यो अचानक हुने विद्युतीय विस्फोटन हो । यसमा बादलबाट बादल र त्यहाँबाट पृथ्वीतर्फ विद्युतीय लहर उत्सर्जन हुन्छ । यो पूर्णतः प्राकृतिक खतरा हो ।
साधारणतयाः चट्याङको आवाज २० किलोमिटरभन्दा टाढा सुन्न सकिँदैन । अपवादको रूपमा ६० किलोमिटरसम्म सुनिएको रेकर्ड छ । आवाजविनाको चट्याङलाई ‘उष्ण बिजुली’ भनिन्छ । सबै चट्याङले विद्युत्को लहर उत्पन्न गराउँछन् । त्यसैले सबै चट्याङ खतरनाक हुन्छन् । यसको पूर्वानुमान लगाउन सकिँदैन । यो वर्षा भएका ठाउँबाट १५ किलोमिटरभन्दा बढीसम्म पर्न सक्छ । त्यसैले चट्याङ परेका बेला अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि पूर्वतयारी गरेमा यसबाट हुने क्षतिको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
चट्याङबाट बच्ने १० उपाय
–बिजुली चम्केको बेला सतर्क रहनु पर्छ।
–फोन, कम्प्युटर, गेम, रेडियो, टेलिभिजन जस्ता विद्युतीय सामग्री नचलाउने।
–विद्युतीय तरङ्ग टिप्न सक्ने फलाम, चिसो वस्तु नछुने।
–बिजुली चम्केको केही समय पानी परेको क्षेत्रमा ननिस्कने।
–सकेसम्म घरभित्रै झयालढोका बन्द गरेर सुक्खा ठाउँमा बस्ने।
–खुला ठाउँमा भए कुनै घर अथवा भवनमा छिर्ने, सम्भव नभए कडा छाना भएको कार, बस वा ट्रकभित्र बस्ने।
–सकभर अग्लो पहाड, ढिस्को र रूखमुनि तथा जमीनमा नबस्ने।
–धातुका ह्याण्डल, चेन भएका ब्याग, वा अन्य सामान नबोक्ने नछुने।
–तारबार, पोखरी, ठूला रुख नजिक नबस्ने।
–चट्याङ परेको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र शरिरमा असहज हुनेगरी केही चिजले घोँचेजस्तो महसुस भएको छ, आङ जिरिङ भएर रौँ ठडिएको छ भने चट्याङले हान्ने संभावना भन्ने बुझेर तुरुन्तै टाउकोमाथि हात राखेर कुइना र घुँडाले टेकेर घोप्टो पर्नु पर्छ।